Markay Malls noqdaan Datacenters ... | Martech Zone
Markay Malls noqdaan Datacenters…
Axad, Juun 29, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Shalay waxay ahayd maalin weyn at Koobka Bean. Patric ayaa laga joojiyay Noobie, Doug Theis ka Macluumaadka Nolosha iyo maalinta dambe, Aadam ka Qoraal Codsi.
Xarumaha Datacenters-ku waxay leeyihiin sheeko run ahaantii qabow, oo qosol badan, oo ku dhexyaal xaruntooda cusub ee Eastgate Mall. Joornaalka Ganacsiga ee Indianapolis wuxuu ku sameeyay sheeko iyaga markay dhammeeyeen iibsiga, laakiin hadda xarunta ayaa hadda soo noolaatay. Waa datacenter buuxa oo leh dawan iyo foori kasta, waxaana aaminsanahay midka kaliya ee Tier IV ee Indianapolis - iyo kan ugu weyn bartamaha-galbeed.
Sawir ka yimid DeadMalls.com.
Eastgate Mall waxaa la dhisay 50-meeyadii wuxuuna kobcay illaa 70-maadkii. Waxay ahayd si rasmi ah u dhintey 50 sano kadib adeeg. Waxaa lagu dhisay dhererka dhismaha Nuke ee USSR, qaar ka mid ah suuqyada waxay leeyihiin dhufeysyo dhulka hoostiisa ah oo lagu dhisay canshuuraha federaalka ee xilligaas. Marka - halkan waxaad ku leedahay xarun ay ku jiraan tanno muuqaallo laba jibbaaran, marin u helidda taraafikada, quudinno koronto oo badan, koronto-dhaliye, qaboojin, hoyga bambooyinka… iyo mallku wuu dhintaa.
Maxaad ku samaynaysaa suuq madhan?
Ku dhis xog-ururin dhexdeeda, dabcan! Ma hubo cidda leh himilada asalka ah ee mashruucan, laakiin waa mid qurux badan - oo xariif ah. Hadda oo qayb weyn oo tafaariiqda ka mid ah ay u dhaqaaqday khadka tooska ah, sidee ayey u wanaagsan tahay in suuq laga beddelo datacenter? Waa nacasnimadii ugu dambaysay ee ku jirtay buuggayga! Eastgate waxaa laga yaabaa inay albaabada u laaban tahay socodka cagaha dhowr sano ka hor, laakiin waxay fursad u leedahay in lagu soo nooleeyo mid ka mid ah, 'suuqyada' ugu waaweyn, 'suuqyada' dalka ku yaal!
Waxaan isku dayi doonaa inaan dejiyo waqti aan ku dalxiis tago Doug usbuuca soo socda ama sidaas. Ma sugi karo inaan arko waxa ay qabteen!
Tags: mallgatexarumaha xogta nolosha
Raadinta Goobta Google ee SERP?
Xeeladda ugu Fiican ee Kobcinta Bloggaaga
Jun 29, 2008 saacadu markay ahayd 6:50 AM
Karama mall waa in dib loogu soo noqdaa xarun xogeed… macno ayey leedahay. Tani waa waxa aan ugu yeeri karno "e-budism"?
Jun 29, 2008 saacadu markay ahayd 8:39 AM
Waan jeclaa Koobka Bean oo aan kula hadlay adiga Doug. Waxaan u baahanahay inaan sida badan sameyno. Anigana igu tiriya markaad booqato (ka kale) xarunta xogta cusub ee Doug!
Jun 29, 2008 saacadu markay ahayd 10:50 AM
Waan ku raacsanahay e-budism.
Taasi waa cabsi ku saabsan suuqa! Ma aanan ogeyn in Doug uu galay wax sidan oo kale ah. Taasi waa wax laga naxo!
Waad ku mahadsan tahay aqoonsiga, Doug. Waqti aad ufiican ayaan qaatay oo aan kula sheekaysanayay adiga iyo Patric iyo shaqaalaha Koobka Bean shalay. Waxaan booqan doonnaa Eastgate oo idin diyaariya.